Ibsa ejjaannoo Konyaa Frankfurtif Naannoo
FDG ABO tin hogganamu Sadaasaa 9 bara 2005 ti haga har´aatti bifa ajaa´ibaatiin Oromiyaa mara keessatti adeemsifamaa jiraachuun isaa waan hedduu nama boonsu dha. Nuti miseensotni ABO Konyaa Frankfurtii fi Naannoo FDG waggaa 1ffaa golee Oromiyaa mara waliin gahee fi hooggana ABO dhugoomse, kan Oromoo yeroo tokkicha akkasitti gurmeessee walduukaa sossoose kun bilisummaa isaa gonfachiisuuf akka yeroo irraa hinfudhatne mirkanneessee jira. Kanaaf, waggaa tokkoffaa ayyaanaa FDG kana ilaalchisee nuti miseensoti ABO konyaa Frankfurti fi naannoo ibsa ejjennoo armaan gadii dabarfannee jirra.
Gootowwan ilmaan Oromoo FDG kana irratti wareegaman bara baraan seenaan kan yaadatu ta`uu isaa ibsa, warreen midhaan qaamaa fi balaan gara garaa irra gahe waan dandeenyu maraan kan bira dhaabbannu ta`uu keenya ni ibsina.
Sababa FDG nis ta`e Oromoo tahanii dhalachuu isaaniif kan Wayyaaneen mana hidhaa gara garaatti guurtee gochaa faashistummaa gara garaa irratti raawwachaa jirtu sagalee guddaan balaaleffachaa akka isheen hatattamaan hiiktu ni akeekkachiifna.
Qabsoon haqaa dheeratus ni mo`ata waan taheef FDG kun hanga Oromiyan bilisoomutti akka itti fufu gaafachaa nutis karaa gama keenyaa waan nurraa eegamu mara gochuuf qophaawoo ta`uu keenya ibsina.
Duguuginsa Sanyii Mootummaan Wayyaane Ummata Oromoo irraatti raawwachaa turtee fi ammas akka haaraatti labsattee jirtu jabeessinee ni balaalefanna.
Wayyaaneen umurii bittaa ishee dheereffachuuf Ummatoota gara garaa amantiin, qomoon, daangaan, qabeenyaan walitti buusuun umrii bittaa ishee dheereffachuuf carraaqii irra turte ammas ittuma jirti. Toftaa qoqqoodanii bituun umrii ishee dheereffachuuf isheen gochaa jirtu kana hundumtuu beekee akka irraa ofeegatu ni hubachiifna.
Kaayyoo TBD hin galiniifis ta´e beeka qabsoo Oromoo dura dhaabbachuuf namoota akka jaarmaattis ta`e nam tokkeen olola dharaa TBD irratti gaggeessan dura ni dhaabbanna. Umrii bitta Wayyaanee gabaabsuuf kaayyoo TBD ijaarameefis hamilee guutuun ni deegarra.
Deegarsa qabsoo bilisummaa Oromoof goonu daran cimsuun FDG kana sababii gochuun miseensoti hundumtuu qarshii ofirratti rammadnee jira.
Miseensota Konyaa ABO Frnakfurtif Naannoo
Sadaasa 12. bara 2006